Incinci / Phakathi / Umthamo oPhezulu- iPandawill Technology Co, Ltd.
Kwiisekethe zePandawill, samkela imibuzo yePCB ngawo nawuphi na umthamo weebhodi, ukusuka kwisekethe enye ukuya kuthi ga kumthamo omkhulu onikezelwa ngaphezulu kwexesha elimiselweyo. Njengesiqhelo yonke imizamo yethu kukuqinisekisa ukuba ngaphandle kwevolumu, ufumana iibhodi eziziswe ngexabiso eliphambili kunye nasekuhanjisweni kwexesha.
Inkqubo yokufunda, ukucaphula kunye nokubonelela ngee-PCB ekugqibeleni ayifani nokuba yeyiphi na encinci okanye enkulu kwaye sibaxabisile abathengi ngokulinganayo, nangona kunjalo iiPCB ziyimveliso 'yoqoqosho lwesikali', oko kuthetha ukuba awona maxabiso aphezulu anokufikelelwa xa ikwazi ukuvelisa amabhetshi amakhulu anokubakho.
Kwiibhodi ezinkulu zevolumu, sibonelela ngokukhetha ukuhanjiswa okucwangcisiweyo okanye sinokunceda kwiinkonzo zolawulo lwesitokhwe ukubonelela ngenani elifanelekileyo leebhodi ezinxulumene nesicwangciso sakho senyanga sokwenza. Sikwabonelela ngendleko zokonga kwabo bathengi bakulungeleyo ukuthatha i-100% yesitokhwe ngokukhawuleza njengoko kuluncedo kuthi, kwaye siza kwabelana nawe ngalo loncedo.
IPandawill iya kubonelela ngexabiso ngokusekwe kumthamo weebhodi zonyaka, kodwa yahlule ubungakanani bemveliso yevolumu enkulu kwinani leebhetshi ezincinci. Oku kuyakuqinisekisa ukuba iibhodi zinobude beyona shelufa-yobomi.
Siyavuya ukukubonelela ngeyona ndlela ifanelekileyo kunye nezimo ukuhlangabezana neemfuno zakho.